Wararka - Maxay ku kala duwan yihiin filimada seddex lakab, shan lakab, toddobo lakab iyo sagaal lakab oo coextrusion ah
Maxay ku kala duwan yihiin seddex lakab, shan lakab, toddobo lakab iyo sagaal lakab oo coextrusion ah
Qalabka wax lagu duubo ee rogrogmi kara, badanaa waxay leeyihiin saddex, shan, toddobo, sagaal lakab oo filim ah. Waa maxay farqiga u dhexeeya lakabyada kala duwan ee filimada? Warqadani waxay diiradda saaraysaa falanqaynta, tixraacaaga.
Isbarbardhiga 5 lakab iyo 3 lakab
Lakabka xayndaabkaqaab dhismeedka shanta ah badiyaa waa udub dhexaadka, kaas oo ka daaya biyaha ku jira cimilada. Sababtoo ah lakabka xayndaabku waa udub-dhexaadka, qalabka kale waxaa loo isticmaali karaa in si weyn kor loogu qaado waxqabadka caqabadda. Nylon waxaa loo isticmaali karaa lakabka asaasiga ah, sidaa darteed qaab dhismeedka 5-lakab oo leh lakabka sare ee PE wuxuu la macaamili karaa waxyaabo badan oo la mid ah filimka PE wuxuuna hagaajin karaa awooda geedi socodka. Intaa waxaa sii dheer, processor-ku wuxuu isticmaali karaa midabka lakabka sare isagoo aan saameyn ku yeelan lakabka isku xidhka ama lakabka xayndaabka.
Saddex filim oo lakab ah, gaar ahaan kuwa isticmaala nayloon, ayaa u janjeera inay fooraraan sababtoo ah sifooyinka jireed ee kala duwan ee qaababka asymmetric-ka ah. Qaab dhismeedka 5-lakab, waxaa aad u badan in la isticmaalo qaab-dhismeed qaabeysan ama u dhow si loo yareeyo curl. Qaybaha ku jira qaab dhismeedka 3-lakab waxaa kaliya lagu xakamayn karaa iyadoo la isticmaalayo nylon copolymer. Qaab dhismeedka 5-lakab, kaliya marka processor-ku uu adeegsan karo naylon 6 ayay suurtagal noqon kartaa in la helo lakab nylon ah oo qiyaastii ah kalabar dhumucda saddex lakab. Tani waxay keydineysaa kharashka alaabta ceyriinka ah iyadoo la siinayo isla guryaha caqabadaha ah iyo hagaajinta ka shaqeynta.
Isbarbardhiga udhaxeeya dabaqa 7aad iyo dabaqa 5aad
Filimada caqabadaha sare, EVOHwaxaa badanaa loo isticmaalaa sidii lakab adag si loo beddelo naylon. In kasta oo EVOH leedahay sifooyin heer sare ah oo ah ka hortagga oksijiinta markay qallajiso, si dhakhso leh ayey uga sii dari doontaa marka ay qoyan tahay. Sidaa darteed, waa wax caadi ah in lagu cadaadiyo EVOH laba lakab oo PE ah oo qaab-dhismeedka 5-lakab ah si looga hortago qoyaanka. Qaab dhismeedka 7-lakab ee EVOH, EVOH waxaa lagu cadaadin karaa laba lakab oo isku dhegan PE, ka dibna lagu ilaaliyo lakabka sare ee PE. Tani waxay si weyn u hagaajineysaa guud ahaan iska caabinta oksijiinta waxayna ka dhigeysaa qaab-dhismeedka 7-lakab inuu u nugul yahay qoyaanka.
Jajabka ama jeexitaanka ayaa sidoo kale dhibaato ku noqon kara shan sheeko oo qaab dhismeed ah. Horumarinta qaab dhismeedka 7-lakab ayaa ka dhigi doonta lakabka caqabadda adag inuu u kala qaybsamo laba lakab oo isku mid ah adoo isku xiraya lakabyo dhuuban. Tani waxay ilaalinaysaa guriga caqabadda iyadoo xirmada ka dhigaysa mid u adkaysata jabitaanka ama jeexitaanka. Intaa waxaa sii dheer, qaab dhismeedka 7-lakab wuxuu awood u siinayaa processor-ka inuu jeexjeexo lakabka kore si loo yareeyo qiimaha alaabta ceeriin. Polymer ka qaalisan ayaa loo isticmaali karaa lakabyada dusha sare, halka polymer ka jaban ay badali karaan inta badan lakabyadii hore.
Isbarbardhiga u dhexeeya dabaqa 9aad iyo dabaqa 7aad
Guud ahaan, qaybta carqaladda ee filimka xannibaadda sare waxay degtaa shan lakab oo dhismaha ah. Sababtoo ah horumarka ku saabsan polymer iyo farsamada farsamaynta, boqolkiiba dhumucda guud ee qaybtaan qaabdhismeedka oo dhan si joogto ah ayey u sii yaraaneysaa, laakiin isla waxqabadka caqabadda ayaa la ilaaliyaa.
Si kastaba ha noqotee, weli waa lagama maarmaan in la ilaaliyo guud ahaan dhumucda filimka. Laga soo bilaabo 7 lakab illaa 9 lakab, processor-yadu waxay ka heli karaan farsamada, muuqaalka iyo waxqabadka qiimaha ugu fiican. Filimada caqabadaha sare leh, kala duwanaanshaha dheeraadka ah ee ay bixiso khadadka 7-lakab ama 9-lakabka extrusion ayaa noqon kara mid la tixgelin karo. Kharashka kordhay ee iibsiga khadka 7-lakab ama 9-lakabka ah ee extrusion-ka wuxuu yeelan karaa mudo celin oo kayar hal sano marka la barbar dhigo khadadka wax soosaarka 5-lakab.
Beitou Industrial Park, No.10 Keji Avenue, Yixing City, Gobolka Jiangsu